Ijaa Bahuuf Ija Baasuu Hin Qabnu -
Ijaa Bahuuf Ija Baasuu Hin Qabnu
By fmegersa | March 23, 2018
Damee Boruu: 03/23/2018
Bitootessa 10, 2018 dhumaatii Ilmaan Oromoo Magaalaa Moyaaleetti keessatti guyyaa waaree uummata nagaan jiruu fi jireenya gaggeefataa jiru irratti raawwatameef waraanni Wayyaanee WBOn haleelamuu ijaa (revenge) ykn haaluu bahuuf akka tahe Mootummaan EPRDF sababa dhiyeefatee jira. Dhumaatii Haroo Arsadii, Calanqoo fi Hammarreesaaf immoo eenyuun ijaa ykn haaluu bahuu akka raawwatame kan dageenye hin jiru. Mootummaan TPLF ilmaan Oromoo lafa irraa dugugee balleessuuf sababa himachuu hin qabu. Akka barbaadetti hidhee, tumee, ajjeessee, qaama irraa cirree bara dheeraa kana guutuu itti sirbee bitaa jira.
Haa tahu malee lolli waraanaa iyyuu seera akka qabu hin dagannu. Loltunuu seera biyyaa tokko keessatti ajaja olii irraa dhufee jedhee seera biyyaa ykn biyya lafaa cabsee yoo nama ajajjeesse lubbuu baaseef itti gaafatamuu qaba. Hojiin TPLF garuu seera biyyaa Itoophiyaa jedhamuufis tahe kan biyya lafaaf kabajaa qabu. TPLF mafia seera biyya lafaa irraa adda taheen humna seera bosonaan jiraatu dha. Akka TPLFiif yoo tahe Uummatni Oromoo nama dhalootan TIgree tahe ajjeessuu miti foon isaa jaji’ee nyaachuun ijaa baasuuf hin danda’u.
Akka dargagoon Oromoo tokko mana hidhaa TPLF biyya Tigrayi keessatti lafa jala itti hidhameen bahe jedhee dhiyeenya kana ONN irratti dubbachaa ture Oromonni butamanii achi gaheen isaanii hin beekamne lafa jala itti hidhamanii jiran keessa, warra iji keessaa bahe, gurraa fi arabni irraa cite arguu isaa raga baha. TPLF kana hin gootu jechuu miti. Jaarsa , jaartii, dubartii ulfaa fi daa’ima ajjeessaa olitti. Hammeenyi kun hunduu waan bu’aa qabuuf itti fakkaachuun ni mala. Sammuu oftuullumaa qabduu gammachuusuuf malee bu’aa hin qabuuf. Uummta Oromoo akka tutta kaanisaa tuqqamee belbilchee kan lafaa kaase hammeenya TPLF raawwachaa jirtu kana akka tahe mamii hin qabu.
Moottonni Amaaraa Uummata Oromoo jaarraa tokko ol kan bituu danda’an” nuti obbolaa keessan“, ”kan nu dhalchu hin beeknu” jechaa karaa duubaa boola qotanii nama Oromoo owwaalaa fi warra jabaa tahe immoo durba isaanii kennuufdhaan malaamaltummaan akka gowwoomsaa turan seenaan raga baha. Mootummaan Amaaraas qabeenya Oromoo saamee ittiiin bashananee yaroo jiraatuu uummatni keenya jireenya gadadoof saaxilamee akka ture ifa jira. Sosobaan Mootota Amaaraa qabsoo bilisumaa uummatni keenya gochaa ture laafisuuf gahaa waan qabu natti fakkaata.
Hammeenyi TPLF salphannee jiraachuu fi ulfinaan du’uu jidhuu akka filannu waan nu dirqeef jecha uummatni keenya sodaa mo’atee murannoo guutuun qabsoo bilisummaa itti seene. Duuchaatti Uummatni Oromoo aduu bilisummaa guyyaa tokko illee taatu argee darbuuf waan filatee TPLF waan barbaadde haa labsitu, hammeenya barbaadde haa hojjetu , abbaa barbaadde haa ajjeeftuu irree tokkoon ka’ee dura dhaabbachaa jira. Kana nama Oromoo tahee dhalate tokko miti biyyi lafaa hundi raagaa tahaa waan jiruuf uummata koo jajuuf jedhee kaasaa hin jiru.
Uummatni Oromoo seeraa fi heera badhaadhaa uummatni biyya lafaa iyyuu irraa baratee nagaan jiruu fi jireenya akka gaggeefatu gargaaru kennaa guddaa qaba. Akkuma kana uummatni keenya aadaa sooresa tahes ni qaba. Aadaa Aaraaraa (conflict resolution) uummatni dhaalaan qabu biyya lafaa kana irratti immoo barnootaa, muxxannoo fi qormaataa dheeraa booda oggummaa aaraaraa horatanii ittiin namoota hojjetan aggarra. Namootni Oromoo tokko tokko waan yaroo kana keessa waa’ee qabsoo uummata keenyaa oogan fakkeessanii barreessan baayyee nama gadisiisa. Fakkeenya fudhachuuf namni maqaa Birhanu Hundee jedhu tokko Afaan Amaaraa fi Oromoo waan hedduu wal keessa laaqaa jira.
Ummatni Oromoo akkataa itti rakkina isaa hiikatu aadaa qaba. Namni kun waa’ee qabsoo uummata Oromoo irraa barreessu yaada. Yoom gara qabsoo uummata Oromoo akka seene hin beeku. Maxxansaa isaa kana keessatti maqaa namootaa gurraan dhaga’ee hunda sarara. Haalla turee fi furmaata argamee dhibame irraa waan beeku hin qabu. ABO Kaayyoo Bilisummaa tahuun isaa hafee ABO kan Badhaasaa, kan Tolasaa, kan Camadaa kan nama biraa inni maqaa beekuu jedhee waama. Yoo akka inni jedhuu ABO kan namoota tokko tokko tahe gaafa isaan du’an ABO wajjin du’ee rakkinni jira jedhu ni hiikama. Garuu waan hubachuu qabu ABO kaayyoo bilisummaa akka tahee fi qabeenya dhuunfaa Uummata Oromoo hundaa akka tahe dha.
Karaa biraa namnuu karaa isatti fakkaateen qabsoo kanaaf gummaachuu irraa dhaabbatee amma nama tokko qofaa duba hiriiruu eegachuu hin qabu. Haa tahu malee diina uummata keenya fixaa jiru dhiisanii afaaniin iyyuu yoo tahe wal irratti bobba’uun haalan fokkisaa dha. Yakkamas waan tahee akka wal nu gaaffachiisus dagachuu hin qabnu. Namni tokko yaada isaa hin ibsatiin ilaacha jedhus hin qabu. Garuu yaroo uummatni keenya Bahaa amma Dhihaa , Kabaa amma Kibaa akka nama tokkotti ka’ee diina isaa isa duraa kan taate TPLF irratti bobbaa’a jiru waa’ee garaagrumaa Oromoo afarsuun bu’aa maalii qabaa? Yoo akeekni isaa qabsoo kana gara boodatti harkisuufis tahee hin milkaa’uuf. Sababni isaa uummatni Oromoo waan barbaaduu fi waan isa baasu adda baasee hubatee jira. Namni kun anaanuu na dogongorsee yaroo koo fudhachaa jira. Waa’ee isa dhiise gara tokkummaa fi gootummaa Uummatni Oromoo itti jiruu deebi’uun na gammachiisa.
Uummatni Oromoo wal irratti miti orma irratti iyyuu ijaa ykn haaluu uummata bahu miti. Yaroo TPLF waraana Liyuu Poolisii Somalee uummata keenya irratti bobaaftee kumaataman ajjeeftuu fi nama miliyoonaa ol jiruu fi jireenya isaa irraa buqqiftee darbitu Uummatni Oromoo Uummata Soomalee isa jidduu jiru irratti bobba’ee hin fixne. Uummatni Somalee obbolaa keenya jedhee ofitti ammate. Ummatni seenaa fi aadaa badhadhaa qabu eenyummaa isaa hojiin akkana mirkaneessa. Uummatni keenya rakkinaaf saaxilamuun isaa nuu haa gubu malee injifannoo siyaasaa biyya lafaa kana irratti kan gonfate Uummata Oromoo akka tahe dagachuu hin qabnu.Uummatni Oromoo diina isaa fi fira isaa adda baasee beekee jira. Har’a s borus diinnii keenya TPLF uummata olaa keenya jiru hundaa wajjin walitti nu diruu shiraa xaxxaa jirti. Shira kana cirree yoo bira darbuu hin dandeenyu tahe akkuma TPLF nuyis uummata keenyaaf diina horachaa deemna.
Akka ayyaana keenyaa tahee biyyi keenya Oromiyaan karaa hundaan sabaa fi sab-lammii hedduun marsamtee jirti. Kufaatiin Mootummaa Itoophiyaa isaan irrattis gaaga’ama hin yaadamne fiduu waan danda’uuf yaadoo qabaachuun isaanii ni mala. Keessattuu akkaataa itti uummatni Oromoo isaan hubatuu fi fudhatu haalaan murteessaa(delicate issue) dha. Yoo karaa qajeelaan yaroo qabsoo itti jiruu kaafne waliin gara fuula duraa tarkaanfachuu hin dandeenyu tahe rakkinni uummata keenyaa fi biyya keenya mudatu salphaa hin tahu. Kanaafuu Uummatni Oromoo sabaa fi sab-lammawwan kanaaf abdii bilisummaa akka tahu irratti hojjechuu qabna.
Namoota dhalootan Tigree illee tahan warra Mootummaa TPLF wajjin dhaabbatee uummata keenyaa fi qabsoo keenya irrra gaaga’ama geessisn seera waraanan adabuu malee haaluu yknn ijaa bahuuf jechaa waan godhamu bareedaa hin tahu. Waan har’a uummatni keenya gochaa jiru biyyi lafaa akka ija baasee nu ilaalaa jiru dagachuu hin qabnu. Ijaa ilmaan Oromoo warreegama qaqqaallii baasaa jiranii baasuuf Fincila Xumura Garbummaa akkuma jalqbne kanaan itti fufnee fiixaan baasuu qabna. Mootummaa TPLF mancaasuun qofa gahaa miti. Isa boodas uummatni keenya ilaa fi ilaamen nagaan jiruu fi jireenya isaa gaggeefachuuf ayyaana argachuu qaba. Haala qajeelaa kana fakkaatu uumuuf waldhaansoon Qeerroon Bilisummaa Oromoo Oromiyaa fi naannoo ishee keessatti deemsisaa jiru haalan amansiisaa dha (Bravo Qeerroo!).
← ከሲዳማ ኤጄቶ በወቅታዊ የሃገራችን ሁኔታ ላይ የተሰጠ መግለጫ Why the state of emergency in Ethiopia could destabilise the horn of Africa →